Wararka Maanta: Sabti, Jun 26, 2021-Wasiirka amniga Puntland oo ka hadlay weerar Daacish la beegsatay wafdi uu hoggaaminayay
Wasiirka amniga oo la hadlay BBC Somali, ayaa xaqiijiyay inuu hal askari ka dhintay, labo kalena ay kaga dhaawacmeen qaraxaan oo loogu aasay wadada dhinaceeda
Cabdisamad Gallan ayaa sheegay qaraxa kadib in ay ciidamadu howlgallo ka bilaabeen buuraha ku dhow aagga, halkaas oo uu sheegay in ay ku tuhmayaan kooxda soo abaabushay weerarkan.
“Koox Daacish ee halkaan ku dhuumalaysata, ma ahan koox usoo bareeri karta ciidamada oo buuraha kasoo dagi kara. Waxa kaliya ee ay awoodaan waa in ay Miino meel ku aasaan ama si gaadmo dadka u beegsadaan,” ayuu yiri wasiirka amniga Puntland.
Gallan wuxuu sheegay inta ay ku sugan yihiin degmada Balidhidhin in ay Daacish ka sifayn doonaan dhulka ay kaga sugan yihiin.
Puntland ayaa sanadkii hore gacanta ku dhigtay dagaalamayaal katirsan kooxda Daacish kadib howlgallo laga sameeyay magaalada Bosaso ee xarunta gobolka Bari.